crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> August | 2018 | HimiloNetwork
Markay Lammaanuhu Mid Noqdaan!
Himilo August 12, 2018	Leave a comment 1,011 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Habeenka ugu horreeya labada qof ee geeddi-socodkooda uga dhiman nolosha, dad badan waxay la tahay guusha ugu danbeysa juhdi iyo dadaal ay kusoo bixiyeen waqti badan sidii ay kusoo gaari lahaayeen kama-danbeysta. Hayeeshe, waa bilowga nolol aan dhammaad laheyn – wad iyo calaf mooyee – oo ay wada qeybsanayaan. Waana xiriir ay ka midoobayaan caqliga, jinsiga, dabeecadda ...
Himilo August 12, 2018	Leave a comment 495 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Markii Eebe ina Adan usoo dejiyay arlada guudkeeda – si ay ugu cammiraan – wuxuu faray inay iska ilaaliyaan dhagarta Sheydaanka. Wuxuuna u tilmaamay jidadka uu ugu soo gabban karo. Balse, ina Aadan waligiis si sax ah uguma hoggaansamin amarrada Eebe faray. Baaqaasina uma ajiibin sidii ugu habbooneyd. Waxaa muuqata in – wixii shalay Nabi Aadan CS ...
Macalin Muslim ah oo Shaqadiisa ku waayay inuu gacan-geliyo ‘salaamo’ Macalimad Ajnabi ah!
Himilo August 11, 2018	Leave a comment 765 Views
Oslo (Himilonetwork) – Macalin Muslim ah kaas oo diiday inuu gacan-geliyo ‘salaamo’ haweeney macalimad la’ ah ayaa laga eryay shaqadiisa taas oo dhalisay dood laba dhinac ka socota – halkaas oo dad badan ay ku tilmaameen ku-xadgudubka xurriyadda caqiidada; qaar kalana bahdil ka dhan ah haweenka. “Waxaan leenahay xurriyad diimeed gudaha Norwey,” ayuu yiri Akhenaton Oddvar de Leon, oo hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa ...
Himilo August 11, 2018	Leave a comment 596 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Masjid ku yaalla gobalka Al-Beheira ee dalka Masar ayaa ku dhawaaqay tartan lagu dhiirri-gelinayo carruurta inay salaadda Subax kusoo tukadaan masjidka si ay ugu guuleystaan lacag dhan LE 1000 ($55) muddo 40 maalmood ah oo xiriir ah. “Waa fikrad fiican oo dhiirri-gelinaysa ubadkeenna inay ku tixmaan kusoo tukashada salaadda Subax masaajidda,” ayuu yiri Mona Ahmed, oo kamid ah daganayaasha Damanhour, Al-Beheira. ...
Himilo August 7, 2018	Leave a comment 312 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Kuma deel-qaafin ereyga Malaay-mileey. Sida aan ugu dhawaaqno ayaan u dhigay. Waayo innaga oo heli karna inaan magacii ku habboonaa u bixino ayaan dooranay inaan ugu yeerno. Dabcanna, sida fudud oo aan magacooda u sahashanay ayaan sidoo kale u liidnay shaqada nadaafadeed oo ay inoo hayaan. Shaqaalaha nadaafadda ee dunida saddexaad waa kuwa ugu ayaanka daran. Kuweennuna ...
Himilo August 5, 2018	Leave a comment 294 Views
China (Himilonetwork) – Muuqaal fiidiyow oo aad ugu baahay baraha bulshada Shiinaha ayaa sababay in la isku maan-dhaafo. Muuqaalka ayaa muujinaya maareeye shirkad oo bariis loo ekeysiiyay kubbad ku ridaya meesha lagu kaadiyo. Kadibna waxay ku wada qoynaysaa kaadida kahor inta aysan cunin bariiskii lagu qooyay kaadida. Marka ay cunto, waxay sidoo kale shaqaalaha amraysaa inay cunaan bariiska. Sidaas ayayna ...
Wiil Saaxiibtiis u toogtay codsi-saaxiibnimo oo facebook loogu soo diray!
Himilo August 5, 2018	Leave a comment 230 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Nin hinaase ah ayaa saaxiibtiis ku toogtay codsi saaxiibtinimo oo facebook loogu soo dirsaday, marka loo eego booliska Florida. 19-jir lagu magacaabo Charles Tenpenny waxaa xiray xafiiska Pinellas County Sheriff’s kadib markii uu toogtay 18-jir laheyd uur 20 isbuuc ah. Tenpenny wuxuu, markiisii hore, sheegay in qof aan la garaneyn oo huwan dhar madow uu saaxiibtiis toogtay xilli ay ...
Daawo – Xaafadda ay ku nool yihiin Yaxaasyada.
Himilo August 5, 2018	Leave a comment 207 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Halkan ka daawo xaafadda aan kaliya marti-gelin dadka, balse sidoo kale ay yaxaasyadu kula dhinac nool yihiin. Waxay ku taalla dalka Burkina Faso ee dhacay Galbeedka Afrika.
Himilo August 5, 2018	Leave a comment 296 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Dhaqamada adduun-weynaha ka jira, xayawaannada waxaa loola dhaqmaa si fiican, naxariis iyo daryeel ku dhisan. Meelaha qaar waa la caabudaa. Diinta Hinduuga, tusaale ahaan, lo’da waxaa lagu qiimeeyaa garashadeeda dabiiciga ah. Balse xayawaan walba ma ahan mid aan qatar laheyn; yaxaaska waxaa beri hore laga caabudi jiray Faraaciintii hore ee Masaarida maadaama loo aaminsanaa inuu yahay tusaale ...
Himilo August 4, 2018	Leave a comment 924 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Markii ay ku adkaato nolosha, dad badan way is dhiibaan. Balse kuma jiro dadkaas Gabriel Heredia. Waa 20-jir u dhashay dalka Argentine. Wuxuu ku dhashay gacmo la’aan. Hayeeshe taasi kama horjoogsan inuu u noolaado si isku filan oo raaxo leh. Taniyo 14-jirkiisii wuxuu jecleystay inuu noqdo tima-jare. Waxaana maanta uu kamid yahay dadka loogu jecel yahay xirfadleyda timaha ...
Muxuu Baadari xertiisa ugu yeeray inay dhistaan guryo kana baxaan kirada?!